အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး (ICJ) ရဲ့ ကြားဖြတ် စီမံဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အမေရိကန် သံအမတ်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး – Shwe Ba
ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးဆောင် သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ၌ လက်ခံတွေ့ ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံရာတွင် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာလိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များ၊ လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် (ICOE) အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်လက် ဆောင် ရွက်နေမှုအခြေအနေ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး (ICJ) ၏ ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက် ချက် (Provisional Measures) နှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည့်အခြေအနေများနှင့် ထာဝရငြိမ်း ချမ်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား အပြန်အလှန်ဆွေး နွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) နှင့် ပြည်ထောင် စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့သည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒုတိယတပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ (ကွညျး) ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးသညျ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အမရေိကနျနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးဆောငျ သော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ယနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ၌ လကျခံတှေ့ ဆုံသညျ။
တှဆေုံ့ရာတှငျ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ပုံမှနျဆကျဆံရေးဆိုငျရာလိုအပျသညျ့ ကိစ်စရပျမြား၊ လှတျလပျသောစုံစမျးစဈဆေးရေးကျောမရှငျ (ICOE) အစီရငျခံစာနှငျ့ ပတျသကျ၍ တပျပိုငျးဆိုငျရာ ဆကျလကျ ဆောငျ ရှကျနမှေုအခွအေနေ၊ အပွညျပွညျဆိုငျရာတရားရုံး (ICJ) ၏ ကွားဖွတျစီမံဆောငျရှကျ ခကျြ (Provisional Measures) နှငျ့ပတျသကျ၍ ဥပဒနှေငျ့အညီ ဆောငျရှကျသှားမညျ့အခွအေနမြေားနှငျ့ ထာဝရငွိမျး ခမျြးရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားအား အပွနျအလှနျဆှေး နှေးကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ (ကွညျး) နှငျ့ ပွညျထောငျ စုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အမရေိကနျနိုငျငံ သံအမတျကွီးတို့သညျ အဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့အတူ အမှတျတရ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။